KDE Plasma 5.23 inosvika neakawanda shanduko uye kupemberera yayo 25th kupemberera | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeKDE Plasma 5.23 yakatoburitswa kare uye iyi vhezheni itsva yakanga yakarongerwa kuti ienderane neyekuyeuchidza makore makumi maviri neshanu yepurojekiti uye kuti muna Gumiguru 14, 1996, Matthias Ettrich akazivisa kuumbwa kwenzvimbo nyowani yemahara yedesktop yakanangana nevashandisi vekupedzisira, kwete mapurogiramu kana mamaneja ehurongwa, uye anokwanisa kukwikwidza nezvigadzirwa zvekushambadzira senge CDE. Iyo GNOME chirongwa, icho chaive nezvinangwa zvakafanana, chakaonekwa mwedzi gumi gare gare. Yekutanga yakagadzikana vhezheni yeKDE 1.0 yakaburitswa muna Chikunguru 12, 1998, KDE 2.0 yakaburitswa muna Gumiguru 23, 2000, KDE 3.0 muna Kubvumbi 3, 2002, KDE 4.0 munaNdira 11, 2008, KDE Plasma 5 muna Chikunguru 2014.
Iyi vhezheni itsva kubva KDE Plasma 5.23 Iyo Breeze theme yakadzoreredza mabhatani, menyu zvinhu, sarudzo mabhatani, anotsvedza, uye scroll scroll. Kuti uvandudze zvirinani zvekushanda nema touchscreen, scroll scroll nemabara ekudzora (spin box) zvakawedzerwa muhukuru, pamwe nechairi mutoro chiratidzo, chakagadzirwa muchimiro chegiya rinotenderera, chakawedzerwa uye chakaitwa chiitiko chinojekesa majeti anobata kumucheto kwepaneru. Background blur inopihwa kune maawadhi ari padesktop.
Imwe yeshanduko inomira pachena ndeye akagadzirisazve kodhi pamwe nekuitwa kweiyo Kickoff menyu, kubvira kuita kwakakwidziridzwa uye kukanganisa kwekukanganisa kwakabviswa, Pamusoro pekupa mukana wekusarudza pakati pekuratidzira zvirongwa zviripo nenzira yechinyorwa kana gridhi remifananidzo, bhatani rakawedzerwa kunamira menyu yakavhurika kuchiratidziri. Pane ekubata skrini, kubata pasi kubata zvino kunovhura mamiriro ezvinyorwa. Yakapihwa kugona kwetsika bhatani ratidziro yesangano manejimendi uye kudzima.
Uyewo Yakagadziriswa interface yekumisikidza system parameter inosimbiswa: Chirevo cheruzivo rwese rwakambotumirwa kune vanogadzira KDE vanopihwa pane Mhinduro peji, zvakare akawedzera imwe sarudzo yekugonesa kana kudzima Bluetooth panguva yekupinda mushandisi.
Pa peji rekupinda rekisheni rekugadzirisa, sarudzo yekufananidza kurongedzwa kwescreen yakawedzerwa. Yekutsvaga interface yekumisikidza kurongeka yakagadziridzwa, mamwe mazwi akakosha akaiswa kune paramende. Pa peji yemamiriro ehusiku peji, zviziviso zvinopihwa zviito zvinotungamira mukuwana kune ekunze masevhisi enzvimbo. Rudzi rwekugadzika kwemavara rinopa kugona kudarika pamusoro peiyo base base muvara scheme.
In the App control Center, kurodha pasi kumhanyisa uye sosi yeapp inoratidzwa pane bhatani rekuisa.
Uye zvakare, iyo kunatsiridzwa kwekuita chikamu kunoenderana neWayland protocol, zvakanaka honguuye ndikamisa kugona kunama kubva kubhodhibhodhi nepakati mbeva bhatani uye shandisa dhonza uye udonhedze interface pakati pezvirongwa zvinoshandisa Wayland uye unomhanya uchishandisa XWayland, yakagadzirisa nyaya dzakasiyana siyana neNVIDIA GPUs uye zvakare yakawedzera rutsigiro rwekuchinja iyo skrini resolution pakutanga pane masisitimu ehurongwa. Yakagadziriswa kumashure blur mhedzisiro. Kuchengetedzwa kweiyo desktop desktop parameter kunoitwa.
Pane rimwe divi Iko kugona kwekuchinja RGB marongero kwakapihwa iyo Intel vhidhiyo mutongi, Wakawedzera nyowani nyowani yekutenderera kwescreen uye yakavandudzwa touchpad chiratidzo chekutonga.
Pane zvimwe zvasara zvinoshanduka izvo zvinomira pachena:
Mutariri webasa ane chiratidzo chekuona chekubaya pane zvidhori zvekushandisa.
Kuti uratidze kutanga kwezvirongwa, yakakosha mhenyu mifananidzo inokurudzirwa.
Mune iyo media player inodzora widget, iyo albha chivharo inogara ichiratidzwa, iyo inoshandiswa panguva imwe chete kugadzira kumashure.
Yakagadziriswa inoenderana skrini masisitimu mune akawanda-moneti setups pakati peX11 uye Wayland zvikamu.
Kuitwa kwe "Present Windows" maitiro kwanyorwazve.
Bug yekuzivisa app (DrKonqi) yakawedzera chiziviso pamusoro peasina kutarisirwa maapplication.
Bhatani "?" Yakabviswa kubva mumawindo ezita nema dialogs uye marongero.
Akaremara kushandiswa kwekujeka kana uchifambisa kana kushandura saizi windows.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » KDE Plasma 5.23 inosvika iine shanduko zhinji uye ichipemberera yayo 25th gore
Google inoenda kune kusangana pa Android